November 13/2017 Waxay Calaamad U Tahay Maalinta Doorashooyinka Madaxweynaha Somaliland – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
November 13/2017 Waxay Calaamad U Tahay Maalinta Doorashooyinka Madaxweynaha Somaliland
Published on Nov 07 2017 // Maqaalo
Mujaahid Siciid Shugri Xuseen
Dhammaan dadka reer Somaliland ee helay kaadhadhka codbixintu waxay sii wadi doonaan hawshooda ilaa ay tagaan sanduuqyada codbixinta November 13th .2017 si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Somaliland. Sida soo bandhigeen Guddida Doorashooyinka Qaranku waxa kaadhadhkii codbixinta qaatay 704.89 codbixiye oo ka mid ah 830.000 qof oo diiwaangashan, taas oo noqonaysa 89% dadkii is-diwaangaliyey, kuwaas oo dhamaantood wada helay kaadhadhkoodii codbixinta . Run ahaantii waa wax cajiib ah inkasta oo jiraan caqabado badan oo dabiici ah, iyadoo ay dhaceen abaaro iyo barokaca. Si kale haddii loo dhigo, waa fariin cad oo loogu talagalay kuwii shaki ka galay balanqaadkii dadka reer Somaliland ee u hoggaansamaya mabaadii’da dimuqraaddiyadda. Codbixiyayaasha waxa la filayaa inay codkooda dhiibtaan maalintaas oo ay kala doortaan murashaxiinta matalaya saddexda xisbi ee tartamaya, Faysal Cali Xuseen oo ka socda Xisbiga UCID, Muuse Biixi Cabdi oo ka socda xisbiga Kulmiye iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro oo u tartamaya xisbiga Waddani. Dhammaantood waa siyaasiyiin xilkas ah oo si wayn ay u xushmeeyaan bulshadda Somaliland.
Sida laga soo xigtay Komihsnka Doorashooyinka Qaranka xarumaha sanduuqyada codbixinta ayaa mar horeba loo aqoonsaday, waxaana lagu dhajin doonaa dhammaan degmooyinka Somaliland, degmooyinka iyo tuulooyinka iyo meel kasta oo laga diiwaan geliyo codbixiyayaasha. Guddida doorashadu wuxuu shaki ku jiraa inuu muujiyo kalsoonida, xirfadnimada iyo shaqada kooxeed. Waxaan wada ognahay oo wax lagu farxo ah in geeddi-socodka doorashooyinku ay ka gudbaan waddo adag iyo caqabado aan la fileynin, laakiin ugu dambeyntii waxa uu noqday guul. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la xuso codsiyada habka codeynta iyo qalabka software-ka ee aan marnaba hore looga isticmaalin Somaliland. Qalabka la soo sheegey wuxuu awood u leeyahay inuu ka hortago codadka ku celiska ah iyo qaababka kale ee is-beddelka kaas oo inta badan keena kalsooni darrada ka dhex jirta dhinacyada tartanka.
Waa in aan sidoo kale muujinaa kalsoonida aan u leeyahay kooxda dhiiri-galinta, maareynta iyo warbaahinta guud ee abaabulay doodda madaxweynanimada markii ugu horeysay taariikhda geeska Afrika. Horumarinta warbaahinta cusubi waxay ahayd wax wayn sababtoo ah waxay ogolaatay oo ay ilaa xad siisay fursado dhamaanba daawadayaasha si ay u qiimeeyaan fahamka aqoonta, fahamka iyo awoodda ay u leeyihiin inay soo jiidaan oo ay ka jawaabaan su’aalaha la weydiiyay dhammaan musharrixiinta. Intii lagu guda jiray barnaamijkaas, waxaan qiyaasi lahaa in dad badani ay sameeyeen fekerkooda ku saabsan musharaxa ay u arkeen inuu ku haboonaan lahaa inuu ku fadhiisto kursiga ugu sareeya ee dawladda, inkasta oo ay ahayd rajo aad u wanaagsan, laakiin ma diidi doono inay jiraan dad badan oo daawadayaal ah oo hore u sameeyay oo ku saabsan doorashadooda.
Maxay Somaliland Ka Faa’iideysaa Geeddi-Socodka Dimuqraadiyadeed Ee Qiimaha Leh?
Xaqiiqdii, waxaan dastuur ahaan isku raacnay oo aan taageernay nidaam xisbiyo badan oo loo yaqaano siyaasad si ay u doortaan hoggaamiyayaasheena golaha magaalada, baarlamaanka iyo madaxa gobolka. Nidaamka dimuqraadiyadda loo doortay waxaa loogu talagalay in lagu xaqiijiyo ka qeybgal siyaasadeed oo ballaadhan isla markaana ixtiraama xuquuqda muwaadiniinta ee dooranaya musharaxiisa jecel iyo in la doorto. Waxa kale oo ay ahayd geedi socodkii ku-meel-gaadhnimada oo ka beddelay magacaabidda qabiillada xisbiyada siyaasadeed si ay u doortaan musharrixiinta danaynaya oo awood u leh inay xafiisyo dawladeed qabtaan. Si kastaba ha noqotee, fekerkaygu waa in nidaamka aynu samaysanay ee sharafta leh lagu qanciyo qabaa’ilka ee ururada bulshada kaas oo ah qalab aad u awood badan oo wax ku ool ah, kaas oo bedelaya xisbiyada. Uma doodo in kala-guurku uu ahaa qalad, laakiin waxaan ku doodayaa in kiimikada siyaasadeed ee ka soo baxday xuduudaha qabiilka iyagoo maraya tuulo, degmo iyo gobollada si fiican loola socdo si loo helo isku dheelitir siyaasadeed oo isku dheelitiran ugu yaraan si loo helo hoggaamiyeyaal siyaasadeed oo macquul ah iyo shaqaale dawladeed oo macquul ah ka hawl gala xafiisyada dawladda. Waxaan aaminsanahay in arrimaha la xidhiidha arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda ee ku hareeraysan muddo dheer iyo haddii ay caan ku yihiin aqoonyahanka bulshada ee Somaliland, ay fursad u heleen in ay soo saaraan falanqayn ku saabsan arrintan taas oo ah tallaabo laga yaabo inay horseed u noqoto in laga tirtiro tartamayaasha siyaasadeed ee aan haysan aragtida.
Marka laga eego aragtidayda, waxaan arkayaa dhammaan tamarta iyo dadaalka aan ku leenahay waddan dhisey hab dimuqraadi ah iyo in la ilaaliyo dhulka, xasilloonida gobolka iyo madax-bannaanida Somaliland waa nasiib daro in aan si buuxda looga bixin qiimaha ay u qalantay bulshada caalamka. Waxay u muuqataa in wakiilada beesha caalamku ay muujinayaan dabeecad heerkulle ah marka ay timaaddo wadashaqeynta arrimaha siyaasadda ee weyn. Dhinaca kale, waxay nagu qabteen il xun, waxaana mararka qaar loogu hanjabay in ay yareynayaan gargaarkooda haddii doorashadu aanay ku dhicin wakhtigeeda iyada oo aan loo eegin dhacdooyinka caadiga ah, taas oo aynaan inaga lafteenu jecelneyn inay dhacdo. Sidoo kale marka doorashadu ay ka badan tahay hal ayaa waxa dhacay wixii ballan-qaad ah oo ay sameeyeen diplomaasiyiin khibrad leh oo ku saabsan taageerada bina-aadamnimada, dib u soo kabashada abaaraha, horumarinta dhaqaalaha iyo xidhiidhka diblomaasiyadeed.
Su’aasha ku jirta jiritaanka Somaliland iyo rajada laga qabo aqoonsiga diblomaasiyadeed.
Somaliland iyada oo ay ugu wacan tahay istiraatijiyad siyaasadeed ee tayada sare leh waxa ay fulisay dhamaan shuruudaha lagama maarmaanka u ah Qaran marka loo eegayo shuruucda caalamiga ah sida Qaraarkii (Montevideo convention in URGUAY 1933), xeerarka aayo ka tashiga iyo kuwa kale eek u taxaluqa qawaaniinta caalamiga ah ayaa dhamaantoodba lagu saleeyey ama seeska looga dhigay jiritaanka qaranimada Somaliland kuwaas oo dhamaantoodba si cad u qeexayo Dastuurka ama qawaaniinta u degsan Qaramada Midoobay iyo Midawga Afrika.
Inskastoo dedaaladaasi iyo talaabooyinkaasi aynu caan ku nahay, hadana waxa caqabad noqday qaraarka Golaha Amaanka ee 814/897. Kaas oo sanadkii 1993-kii Madaxweynihii Jamhuuriyada Somaliland Maxamed Xaji Ibraahim Cigal uu ka soo saaray War-saxaafadeed uu ku diidan yahay heshiiskaasi oo uu u diray Golaha Amaanka oo ku wajaqan Qaraarkaasi Qaramada Midoobay ee dhigaya in “In dadka Soomaalidu ay masuuliyadi ka saaran tahay inay iyagu xalistaan kala duwanaansha siyaasadeed ee dhexdooda ah”. Waxaanu sheegay in qaraarkaasi aan loo cuskan karin Jamhuuriyada Somaliland . “Waxa uu sheegay in qaraarkaasi dhigayo “in maskaxda lagu hayo xushamaynta madaxbanaanida iyo sharafta dhuleed Somalia”. Waxaanu dib ugu diray oo uu cadeeyey in qaraarkaasi aanu dhexdhexaad ahayn oo uu dhinac ka raran yahay, sidaa darteedna aanu Somaliland wax tar u lahayn.”
Hase yeeshee waxa aynu fahmi karnaa in waxyaalaha uu ka kooban yahay qaraarkaasi ay awoodiisa, ujeedadiisa iyo macnihiisu lumisay dhibaatada siyaasadeed ee Somalia gudaha usii galayso. Xaqiiqdiina aanay muuqan inay xal ka gaadhaan farqiga siyaasadeed ee u dhexeeya ee Golaha Amaanku uu sida jaahilnimada ah uu ugu saleeyey Qaraarkiisa uu ansixiyey, kaas oo cutubka 7aad uu awood u siinayo inay codsan karaan in ciidamo nabad ilaalineed ay u diri karaan wadamada urur goboleedka IGAD.
Sidaa darteedna lagu unkay ciidamada AMISOM oo ka yimid Waddamada IGAD iyagoo iskaashi kala yeelanaya UNSOM, UNPOS, UNSOS si ay dib ugu dhisaan una ilaaliyaan madaxbanaanida dhuleed iyo sharafta Somalia.
Nasiibdaro se mashruucaasi aan dhamaadka lahayn waxa uu baaqi ku sii noqda fashil sababtoo ah Al-shabab ayaa ilaa hada sii wada dilka shacabka, gacantana ku haya inta badan gobolada iyo magaalooyinka Somalia.
Madaxweyne Farmajo Hadal Ka Soo Yeedhay Dhawaan Ayaa Cadeeyey;
Kadib weerar Argagax leh oo ka dhacay muqdisho oo ay ku dhinteen dad tiro badan oon waxba galabsan; Madaxweyne Maxamede Cabdilaahi Farmajo waxa uu cod dheer ku sheegay in xaalada amaan ee dalka ay sugi kari waayeen ciidamada dawlada federalka ah iyo sidoo kale kuwa Amisom. Waxaana dhawaaqaasi uu hoosta ka xariiqay in Al-shabab ay moral ahaan ay ka sarayso ciidamada Somalia.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa saddex qodob oo muhiim ah. Marka koowaad Codbixiyeyaasha Doorashada Madaxtooyada Somaliland waa inay si dareen leh ugu soo baxaan codbixinta oo ay go’aansadaan inay doorasho adag galaan.
Mark labaad waxay u baahanahay in si adag aynu ugu doodno in aynu ka mid noqono shanta xubnood ee rigliga ku ah golaha amaanka oo nasiibdarada haysataa ay noqotay inay ka indha la’yihiin fahamka farqiga siyaasadeed ee u dhexeeya Somaliland iyo Somalia.
Marka saddexaad waa in aynu indha dheer u yeelanaa kooxaha isku dayaya inay wiiqaan oo ay hoos u dhigaan jiritaankeena oo dadka Somaliland ay u istaagaan iyagoo midaysan. Waa inaynu sii wadnaa halganka diblomaasiyadeed, dhimaato ma leh wakhti dheer oo ay qaadato ilaa inta aynu ka guulaysanayso oo aynu soo jiidasho iyo dareen u lahaano xubnaha horusocodka leh ee xubnaha ka ah golaha amaanka oo aynu kala shaqayno iyaga sidii aynu ugu guulaysan lahayn aqoonsiga diblomaasiyadeed.